वर्ल्ड Archives - नेपाल आज
विश्व ध्वस्त पार्न आफ्ना तीनवटा बम नै काफी भएको उत्तर कोरियाको दाबी
वैशाख १२ । उत्तर कोरियाले विश्व ध्वस्त पार्न आफ्नो तीनवटा बम नै पर्याप्त रहेको दाबी गरेको छ । पश्चिमी मुलुकका लागि उत्तर कोरियाका अनौपचारिक दूत आलेजान्ड्रो काओ डि बोनोसले केवल तीनवटा उत्तर कोरियाली बमले विश्व ध्वस्त हुने दाबी गरेका हुन् । आलेजान्ड्रो अन्य मुलुकसँग सांस्कृतिक सम्बन्धलाई लिएर उत्तर कोरियाको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । पछिल्लो समय उत्तर […]
माओवादी आक्रमणमा २४ प्रहरीको मृत्यु
वैशाख १२ भारतको छत्तिसगढको सुक्मा जिल्लामा नक्सलवादीले गरेको आक्रमणमा २४ प्रहरी जवानको मृत्यु भएको छ । कालापत्थर क्षेत्रमा भएको सो भिडन्तमा ठूलो संख्यामा हताहती भएको डिआईजी सुन्दर राजले पुष्टि गर्नुभएको हो । प्रहरीका अनुसार सो क्षेत्रमा सडक उद्घाटन समारोहका लागि गस्तिमा निस्केका सीआरपीएफका प्रहरी जवानमाथि नक्सलवादीले घेरा हालेर आक्रमण गरेका थिए । नक्सलवादीले प्रहरीको हतियार […]
उत्तर कोरिया बारे छलफल गर्न सबै सिनेटरलाई ह्वाइटहाउसमा निम्ता
वैशाख १२ । उत्तर कोरियाको मिसाइल तथा परमाणु कार्यक्रमप्रति अमेरिकाले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । उत्तर कोरियाको विषयमा जानकारी गराउन सबै अमेरिकी सिनेटरलाई ह्वाइट हाउस बोलाइएको छ। कुनै एक विषयमा जानकारी गराउन वा छलफल गर्न यसरी सबै सिनेटरलाई ह्वाइट हाउस बोलाउनु अमेरिकामा असामान्य मानिन्छ । उत्तर कोरियासम्बन्धी ब्रिफिङ भने बुधबार गरिनेछ । ब्रिफिङमा एक […]
भारतको छत्तीसगढमा माओवादीकाे हमला, २४ जवान मारिए
वैशाख – ११ । भारतको छत्तीसगढको सुकमा जिल्लामा माओवादीको हमालामा परी केन्द्रिय रिजर्व प्रहरी बलका २४ जवान मारिएका छन् । सो घटनामा अन्य घाइतलेलार्इ हेलिकप्टरबाट रायपुर पठाएकाे बीबीसीले बताएको छ । जिल्लाका एसपी अभिषेक मीणाले २४ सैनिक मारिएको पुष्टि गरेका छन् । यस घटनापछि राज्यका मुख्यमन्त्री रमन सिंहले आपतकालिन बैठक बोलाएका छन् । प्रहरीका अनुसार चिंतागुफाको […]
उत्तर कोरियाकाे क्षेप्याश्त्र परीक्षणका विषयमा अमेरिका तथा चिनियाँ राष्ट्रपतिबीच फोनवार्ता
बैशाख – ११ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तथा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ्गबीच साेमबार बिहान टेलिफोन वार्ता भएको छ । उक्त वार्तामा दुई देशका बीच रही आएको दौत्य सम्बन्ध र हालै उत्पन्न उत्तर कोरियाली समस्याको गम्भीर छलफल तथा बिश्लेषण गरिएको जनाइएको छ । केही हप्ता अघिदेखि उत्तर कोरियाले लगातार आफ्नो आणविक शक्ति र क्षेप्याश्त्र परीक्षण […]
उत्तर कोरियामा अमेरिकी नागरिक पक्राउ
बैशाख ११ । उत्तर कोरियाको राजधानी प्योङयाङस्थित विमानस्थलमा अमेरिकीमूलका कोरियाली नागरिक किम स्याङ डुक पक्राउ परेका छन् । चीनमा प्राध्यापन गर्दै आएका उनले प्योङयाङ विश्वविद्यालयमा समेत धेरै समय प्राध्यापन गरेको दक्षिण कोरियाली सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । उनी एक महिनादेखि उत्तर कोरियामा राहत कार्यमा सक्रिय थिए । उत्तर कोरियामा पक्राउ पर्ने डुक तेस्रो अमेरिकी नागरिक हुन् […]
जर्ज एच डब्ल्लु बुसलाई भेट्न अस्पताल पुगे जर्ज डब्लु बुस
Posted on: April 24, 2017April 24, 2017Posted by: Tirtha Khanal
वैशाख १० । अचानक अस्वस्थ भै गत शुक्रबार उपचारार्थ भर्ना भएका अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जर्ज एच डब्ल्यु बुस अझै अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन् । उनको स्वास्थ स्थितिको जानकारी लिन उनका छोरा, अर्का पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुस अस्पताल पुगेका थिए । ९२ बर्षिय पूर्वराष्ट्रपति बुसलाई गत शुक्रबार अचानक लगातार कडा खोकी लागेकाले तत्कालै स्थानीय हाउस्टन मेथोडिस्ट हस्पिटल […]
सोमालिया विस्फोटमा आठ सैनिकको मृत्यु
वैशाख – १० । सोमालियाको अर्धस्वशासित राज्य फुन्टल्याण्डमा सडकको छेउमा विछ्याइएको एक बम आइतबार विस्फोट हुँदा कम्तिमा आठ सैनिकको मृत्युभएको यहाँको प्रहरीले जनाएको छ । घटनामा तीन जना सैनिक अधिकारी घाइते भएका बताइएको छ । उक्त क्षेत्रमा इश्लामिकस्टेट (आइएस) समूहको प्रभाव क्षेत्र हो । विस्फोट सेनाको गल्यालातर्फ हिड्ेको गस्ती गाडीहरुलाई लक्षित गरी गराइएको थियो घटनाको […]
इजरायलद्वारा सिरियाली सैन्य अखडामा हमला, तीन सैनिकको मृत्यु
वैशाख – १० । इजरायलले गोलनहाइट नजिकैको सिरियाली सरकारी सैन्य अखडामा आइतबार हमला गर्दा कम्तिमा तीनजना सिरियाली सेनाको मृत्यु भएको सिरियाली सैनिक अधिकारीले बताएका छन् । सैनिक अधिकारीले अलफवार शिविर नजिकैको कुनैत्रामा भएको उक्त घटनामा घाइतेसमेत बनेको एएफपीलाई बताएका छन् । तर, घटनामा हवाई आक्रमण भएको थियो वा गोलावारी थियो भन्ने नखुलेको बताइएको छ । […]
भेनेजुयला: ‘मौन प्रदर्शन’का क्रममा २० जनाको मृत्यु
बैशाख – १० । राष्ट्रपति निकोलस मादुरोकाविरुद्धमा विगत तीन हप्ता देखि भइरहेको प्रदर्शनका क्रममा अहिले सम्म २० जनाको मृत्यु भएको छ । राजधानीदेखि पूर्बतर्फ आइतबार पनि सेतो कपडा लगाएका प्रर्दशनकारीहरुलाई प्रहरीले पछाडि धपाउनका लागि अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । सरकार पक्षीय व्यक्तिहरुले प्रदशर्ननकारीहरुलाई हमला गरेको एक जना महिला पत्रकारले बताउनुभयो । मादुरोका पूर्ववर्ती ह्युगो चाभेजको […]
मारुती कार शोरुमा आगलागी हुँदा दुई सुरुक्षा गार्डको मृत्यु, १५ कार जलेर नष्ट
वैशाख – १० । भारतकाे न्यू मुम्बईस्थित खारघर क्षेत्रमा रहेको एक मारुती कार सोरुममा भिषण आगलागी हुँदा दुई सुरक्षा गार्डको मृत्यु भएको छ । आगलागीमा १५ भन्दा वढी कार जलेर नष्ट भएका छन् । आगलागी आइतबार विहान ५ बाट सुरु भएको तर अहिले बारुण नियन्त्रक टोलीले आगो नियन्त्रणमा लिइसकेको भारतीय संचार माध्यम भाष्करले जनाएको छ […]
प्रान्सः नयाँ राष्ट्रपतिकाे लागि मतदान सुरू
वैशाख – १० । फ्रान्सको नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि आइतबार पहिलो चरणको मतदान सुरु भएको छ। अहिले प्रतिश्पर्धामा रहेका ११ जना उम्मेद्वारहरु मध्ये बढी मत ल्याउने २ जनाका बीचमा दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धा हुने छ। कसैले पनि स्पष्ट बहुमत ल्याउने नदेखिएकाले दोस्रो चरणको मतदान मे ७ तारिखका दिन गर्ने यसअघि नै तय भइसकेको छ। विभिन्न सर्वेक्षणहरुले […]
जमिनमुनि गाडेको तीन दिनपछि निकाल्दा नवजात शिशु जिउँदै !
वैशाख ९ । नवजात शिशु जमिनमुनि गाडेको तीन दिनपछि निकाल्दा जिउँदै भेटिएको छ । गत विहीबार दक्षिण अफ्रिकाको क्वाजुल नेटल प्रान्तमा रहेको पडडक सहरकी २४ वर्षीया एक महिलाले आफ्नो नवजात शिशु जमिनमुनी गाडेकी थिइन् । काठ फर्निचरमा मजदुरी गर्ने ती महिलाले एक शिशुलाई यसअघि नै जन्म दिइसकेकी थिइन् । दोस्रो शिशु जन्मिएपछि बाबु–आमाको डरले काठ […]
भेनेजुयलामा प्रदर्शनका क्रममा १५ जनाको मृत्यु
वैशाख – ९ । भेनेजुयलामा विपक्षीले गरिरहेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा अहिलेसम्म १५ जनाको मृत्यु भएको सरकारी अधिकारीले पुष्टी गरेका छन् । शुक्रबार जारी गरिएको विज्ञप्तीमा आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसामा परी बिहीबार राति र शुक्रबार विहान ११ जनाको काराकासमा मृत्यु भएको जनाइएको छ । अर्का एक जनाको भने मिरन्डा प्रदेशको पेटरेमा मृत्यु भएको बताइएको छ । गत […]
वैशाख – ९ । अफ्रिकी सङ्घको शान्ति मिसनको सदस्य रहेको केन्याली सैनीकहरुले दक्षिणी सोमालियामा गरेको सुरक्षा कारबाहीमा परी अल शबाब आवद्ध ५२ जना लडाकुहरुको मृत्यु भएको छ । केन्याली सुरक्षा फौजका प्रवक्ता जोसेफ ओउथले सुरक्षाकर्मीहरुले अल शबाब आतङ्ककारीका शिविरहरु भत्काइदिएका छन् । घटनास्थल तल्लो जाबादेखि झन्डै नौ किलोमिटर उत्तरतर्फ पर्दछ । कारबाहीका क्रममा एक के […]
अफगानिस्तानः तालिबानी अाक्रमणमा १५० सैनिक मारिए
वैशाख – ९ । तालिबानी बन्धुकधारीहरुले अफगानिस्तानको उत्तरी शहर मजार ए शरिफमा सय भन्दा बढी सैनिकलाई मारिदिएको अफगानीस्तानको रक्षा मन्त्रालयले शनिबार जनाएको छ । विद्रोहीहरुले एउटा सैन्य अखडामा रहेको मस्जिदमा शुक्रबारको साप्ताहिक प्रार्थना सकेर फर्किरहेका सैनिकहरु र चमेना गृहमा नास्ता गरिरहेका अन्य सैनिकहरुलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको मन्त्रालयद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। एक जना उच्च […]
किसानको प्रदर्शनमा तिब्र गतिको ट्रक घुस्दा २० मृत्यु
वैशाख – ८ । भारतको आन्ध्र प्रदेशमा आन्दोलनरत किसानको बीचमा ट्रक घुस्दा २० जनो ज्यान गएको छ । शुक्रबार आन्ध्र प्रदेशको चित्तूर जिल्लास्थि येरपेडु प्रहरी कार्यालय अगाडि भएको सो घटनामा कयाैँ किसान घाइते भएका छन् । किसानको एक समूहले आन्दोलन गरिरहेको क्षेत्रमा तिब्र गतिमा आएको ट्रक छिरेको आन्ध्र प्रदेशको प्रहरीले जनाएको छ । सो क्षेत्रमा […]
राष्ट्रपति निर्वाचन पहिल्यै पेरिस हमला, आईएसले लियो जिम्मा
वैशाख – ८ । फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको गोलाबारीको जिम्मा इस्लामिक स्टेटले लिएको छ । प्रान्समा चलिरकेको राष्ट्रपतिय निर्वाचनको पहिलो चरणको अघिल्लो दिन सो हमाला भएको थियो । उक्त घटनामा एक प्रहरीको ज्याने गएको छ । प्रहरीको जवाफी कारवाहीमा हमलाकारी पनि मारिएको पेरिसले प्रहरीले जनाएको छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति प्रान्सुआन् ओलान्दले यो घटना आतंकवादसँग जोडिएको […]
आतंककारीको निशानामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र योगी आदित्यनाथ
वैशाख ८ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ आतंकवादीको निशानामा रहेको भारतीय गुप्तचर संस्थाले जनाएका छन् । करिब एक दर्जनको संख्यामा आतंकवादीहरु उत्तर प्रदेश प्रवेश गरिसकेको सूचना प्राप्त भएको पनि गुप्तचरहरुको भनाइ छ । गुप्तचर विभागसहितका निकायले पाएको जानकारी लखनउ प्रहरी मुख्यालयमा पठाइसकिएको पनि भारतीय संचारमाध्यमहरुले गुप्तचर स्रोतलाई उद्धृत गर्दै […]
उत्तर कोरियाले सार्वजनिक गर्यो अमेरिका ध्वस्त पारेको भिडियो (भिडियोसहित)
वैशाख ८ । उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीचको खिचातानी चलिरहँदा सोसल मिडियामा हालै सार्वजनिक भएको एउटा भिडियाले विश्वलाई झस्काइदिएको छ । सिरियामा मिसाइल आक्रमण तथा अमेरिकामा आफ्नो सबैभन्दा ठूलो गैरपरमाणु बम खसाएपछि अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई चेतावनी दिइरहेको छ । अमेरिकी चेतावनीविरुद्ध उत्तरले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ, ‘अमेरिकी आक्रमण भए उविरुद्ध परमाणु हमला गरिनेछ ।’ भिडियोमा उत्तर […]
फ्रान्समा गोली चल्याे एक प्रहरी मारिए, दुई घाईते
बैशाख ८ । फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा गरिएको गोलीकाण्डमा आतंकवादीको संलग्नता रहेको राष्ट्रपति फ्राँस्वाँ ओलान्दले दावी गरेका छन् । एक प्रहरी मारिने गरी गराइएको आक्रमणमा अरु दुई जना घाइते भएका छन् । प्रहरी कारवाहीमा गोली प्रहार गर्ने व्यक्ति पनि मारिएका छन् ।इस्लामिक अतिवादी समूह आईएसले घटना आफूले गराएको दावी गरेको छ । पेरिसको शान्जे लीजे भन्ने […]
कोलम्बियामा आएको बाढीले १६ जनाको मृत्यु
वैशाख–७ । कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा आएको बाढी पहिरोमा परी कम्तीमा १६ जनाको मृत्यु भएको अधिकारीले बताएका छन् । बाढी पहिरोकै कारण सयौं जनाको मृत्यु भएको केहीदिनपछि पुनःअर्को बाढी पहिरोको घटना भएको सरकारी उद्धारकर्ताको भनाइ रहेको छ ।मनिजल्स सहरमा भिषण वर्षापछि आएको यस बाढी पहिरोका कारण अरु कम्तीमा सात जना हराइरहेका जनाइएको छ । यसअघि मोकोअ […]
अफगानिस्तानः सुरक्षा कारबाहीमा ४७ तालिवान लडाकू मारिए
Posted on: April 20, 2017April 20, 2017Posted by: netra
बैशाख – ७ । अफगानिस्तानमा भएको पछिल्लो सुरक्षा कारबाहीमा परी ४७ जना तालिवान लडाकूहरु मारिएका अफगान रक्षा मन्त्रालयले बिहीबार जानकारी दिएको छ । ‘अफगान राष्ट्रिय सुरक्षा बल (एएनएसएफ) ले देशका केही क्षेत्रमा गरेको सुरक्षा कारबाहीका क्रममा शान्ति र स्थिरताका शत्रुका रुपमा रहेका आतङ्ककारीहरु मारिएका छन्,’ रक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । गत २४ घण्टाको […]
सिड्नीका रेल स्टेशनहरु खतरापूर्ण – अध्ययन
वैशाख – ७ । अष्ट्रेलियाको सिड्नीका विभिन्न रेल स्टेशनहरु अत्याधिक भिडभाडका कारण खतरापूर्ण बन्न थालेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अनुसन्धानकर्ताहरुले तयार पारेको प्रतिवेदनमा इपिङ, स्ट्राथफिल्ड र उत्तरी सिड्नीका रेल स्टेशनहरुमा बनाइएका भौतिक संरचनाहरु पर्याप्त र आवश्यकता अनुसार नभएको उल्लेख गरिएको छ । सिड्नी विश्वविद्यालयका यातायात र आपूर्ति व्यवस्थापन विज्ञ जोफ्री क्लिफ्टनले सहायक सहरहरुमा मान्छेहरुको […]
बाबरी मस्जिद काण्ड, भारतीय राजनीतीमा ठूलो हलचल
वैशाख ७ । बाबरी मस्जिद विध्वंश मामलामा भारतको सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवानीसहित शीर्ष नेतामाथि मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । आपराधिक षडयन्त्र रचेको आरोपमा मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती लगायत १० नेताविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न अदालतले बुधबार आदेश दिएको हो । न्यायाधीशद्वय पीसी घोष र रोहिंटन नरीमनको संयुक्त […]
भारतमा यात्रुबाहक बस दुर्घटना, ४४ जनाको मृत्यु
वैशाख–६ । उत्तरी भारतको हिमालयन क्षेत्रमा भएको बस दुर्घटनामा परी कम्तीमा ४४ जनाको मृत्यु भएको छ । पहाडी अफ्ट्यारो बाटोबाट गहिरो खोँचमा खसेर बस दुर्घटना भएको घटनास्थलमा पुगेको स्थानीय सरकारी अधिकारीहरुले बुधबार जानकारी दिएका छन् । हिमाञ्चल प्रदेश अन्तर्गत पर्ने सिम्लाका जिल्ला आयुक्त रोहनचन्द ठाकुरले प्रारम्भीक विवरणअनुसार अहिलेसम्म ४४ जनाको मृत्यु भएको खवर आफुलाई प्राप्त […]
राष्ट्रपति ट्रम्पद्धारा – ‘अमेरिकन नै किनौ, अमेरिकन नै राखौ’ आदेश जारी
वैशाख–६ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘अमेरिकन नै किनौ, अमेरिकन नै राखौं’ भन्ने कार्यकारी आदेशमा मङ्गलबार हस्ताक्षर गरेको छ। विस्कन्सिनस्थित एउटा उद्योगको भ्रमणको क्रममा ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको अधिकारीले जनाएका छन् । ‘यो कार्यबाट हामी विश्वलाई निकै ठुलो सन्देश र संकेत प्रवाह गरेका छौंँ, हामीले हाम्रा कामदारलाई संरक्षण गर्ने छौं, हाम्रा जागिरको प्रतिरक्षा गर्ने छौं, […]
फेसबुक लाइभ गरी एक वृद्धको हत्यागर्नेद्वारा आत्महत्या
बैशाख ६ । अमेरिकाको क्लीभल्याण्ड शहरमा आफ्ना हजुरबुबाको हत्या गरेको दृष्य फेसबुकमा प्रत्यक्ष९लाइभ० देखाउने स्टिभ स्टिफन्सले आत्महत्या गरेका छन् । प्रहरीले पिछा गरिरहेको समयमा उनले आफैंलाई गोली हानेको प्रहरीले जनाएको छ । गत आइतवार ३७ वर्षिय स्टिफन्सले ७४ वर्षीय रोबर्ट गुडविनको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । हत्याको कारण भने खुल्न सकेको छैन । स्टीफन्सले […]
चीनमा अनुशासनहिन कार्य गर्ने ८५ हजार सरकारी अधिकारीलाई कारबाही
Posted on: April 18, 2017April 18, 2017Posted by: netra
वैशाख – ५ । कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना (सिपिसी)का अनुशासन निरीक्षण अधिकारीले यस वर्षको सुरुदेखि चार महिनाभित्रमा देशभरी ८५ हजार सरकारी अधिकारीहरुलाई अनुशासनहिन कार्य गरेको आरोपमा कारबाही गरेको छ । सरकारी कारबाहीमा पर्ने व्यक्तिहरुमध्ये प्रान्तीय र मन्त्रीस्तरका १४ जनासमेत रहेका ‘सिपीसी सेन्ट्रल कमिसन फर डिसिप्लेन इन्स्पेक्शन (सीसीडिआइ)’ले जानकारी दिएको छ । सिसिडिआइले आफ्नो वेबसाइडमा मंगलबार […]
एसिड आक्रमणमा बाह्र जना घाइते
वैशाख–४ । बेलायतको राजधानी लन्डनमा रात्रिकालीन क्लबमा सोमबार बिहानै एसिड हमला हुँदा कम्तीमा १२ जना घाइते भएका प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेमध्ये करिब २० देखि २५ वर्ष उमेरका दुई युवाको स्वास्थ्य अवस्था एसिडले जलेर गम्भीर बनेको छ । उनीहरुको अवस्था स्थिर रहेको छ भने बाँकी १० जना सामान्य घाइते भएको प्रहरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ […]
हत्या गरेको दृश्य फेसबुकमा लाइभ !
Posted on: April 17, 2017April 17, 2017Posted by: Tirtha Khanal
बैशाख ४ । अमेरिकाको ओहायो राज्यका प्रहरीले आफूले एक जनाको हत्या गरिरहेको दृश्य फेसबुक लाइभमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । प्रहरीले उनलाई खोजी गरिरहेको बताएका छन् । अमेरिकाको क्लिभलेण्ड शहरका अधिकारीहरुले भनेका छन् स्टिभ स्टेफन्स नामक ती व्यक्तिले एक जना वृद्धलाई गोली हानी मारेको भिडियो फेसबुक लाइभमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । एक छुट्टै भिडियोमा ती स्टेफन्स […]
बैशाख ४ । टर्कीमा गरिएको जनमत संग्रहमा राष्ट्रपतिको शक्ति बढाउने पक्ष विजयी भएको छ । संसदीय व्यवस्था विस्थापन गरी कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीका पक्षमा रहेका राष्ट्रपति रिसेप तैयप अर्दोगानले स्पष्ट बहुमत पाएका हुन् । अब अर्दोगान सन् २०२९ सम्म राष्ट्रपति रहिरहनसक्ने बताइएको छ । राष्ट्रपति शासनको पक्षमा ५१ दशमलव ३७ तथा विपक्षमा ४८ दशमलव ६३ प्रतिशत […]
वैशाख–३ । भारतीय प्रमुख तीन शहर मुम्बई, हाइदरावाद र चेन्नईस्थित विमानस्थलबाट आइतबार विमान अपहरण प्रयासको हल्ला चलेपछि उक्त विमानस्थलमा उच्च सतर्कता अपनाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मुम्बई, हाइदरावाद, चेन्नईबाट विमान अपहरणको सूचना सुरक्षा निकायलाई एक महिलाबाट शनिबार राति इमेलमार्फत आएपछि उच्च सतर्कता अपनाइएको मुम्बई प्रहरीले जनाएको छ । उक्त महिलाले आफूले […]
राष्ट्रपति इर्डोगानको शक्ति बढाउन टर्कीमा जनमतसङ्ग्रह
Posted on: April 16, 2017April 16, 2017Posted by: Bishow Rimal
वैशाख–३ । टर्कीमा आइतबार जनमतसङ्ग्रहको मतदान सुरु भएको छ । यहाँका राष्ट्रपति रेसेप तायिप इर्डोगानको शक्ति बढाउने उद्देश्यले हुन गइरेहको यस जनमतसङ्गह आज बिहानबाट सुरु भएको हो । राष्ट्रपतिको भूमिका परिवर्तनको लागि हुन लागेको यस जनमतसङ्ग्रहमा मतदानको लागि पाँच करोड ५३ लाखभन्दा बढी टर्कीज योग्य भएको बताइएको छ । यदि यो जनमतसङ्गह इर्डोगानको पक्षमा मतदान […]
भ्रष्टाचारको अभियोगमा इजिप्टका पूर्वगृहमन्त्रीलाई सात वर्ष कैद
वैशाख–३ । इजिप्टका पूर्वगृहमन्त्री हविव अल एड्लीलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा यहाँको एक अदालतले सात वर्ष जेल सजाय तोकेको छ । एड्लीविरुद्धको मुद्दा इजिप्टका पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुवारकको युगमा सरकारमा सहभागी अधिकारीविरुद्ध लागेको सम्भवत यो अन्तिम मुद्दा हो । मुवारकको सरकारमा कडा समर्थकका रुपमा रहेका पूर्व मन्त्री एड्लीले आफू माथिको जेल सजायँ विरुद्ध पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् । मुवारक […]
हज गर्न जाँदा यौन दुर्ब्यवहारको शिकार भए : सोफिया
Posted on: April 16, 2017April 16, 2017Posted by: Tirtha Khanal
बिग बोस –७ मा सहभागी मोडल सोफिया हायातले हज गर्न जाँदा (मुस्लिमको धार्मिकस्थल) मा आफुलाई यौन दुब्र्यबहार भएको बताएकी छिन् । सोफियाले एउटा भिडियो पोष्ट गर्दै भिडमा आफुलाई एक पुरुषले यौन दुब्र्यबहार गरेको बताएकी छिन् । उनी आफ्नो विहेको कुरा छिनिएका युवक व्ल्याड सटेन्स्युसंगै हज गर्न मक्का गएकी थिइन् । उनको भनाई अनुसार भीडमा व्ल्याडसँग […]
सिरियाका एलेप्पोमा आत्मघाती हमला ४५ सर्वसाधारणको मृत्यु
वैशाख ३ । सिरियाको एलेप्पो शहर सरकार नजिक भएको आत्मघाती कार बम विष्फोटमा ४५ जना मारिएका छन् । संघर्षको चेपुवामा परेका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्रमा बस केहीबेर रोकिंदा आक्रमण भएको थियो । बसमा दुईवटा गाउँबाट मानिसहरुलाई लगिंदै थियो । ती गाउँ विद्रोहीको घेरामा रहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । यो घटनापछि संघर्षको चेपुवामा […]
भाजपाका नेताले तोके मुख्यमन्त्रीको टाउकाको मोल ११ लाख भारु
वैशाख ३ । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको टाउकोको मूल्य ११ लाख भारु तोकेपछि भारतभर आक्रोश बढेको छ । भरतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता योगेश भार्सनेले मुख्यमन्त्री बनर्जीको टाउकोको मूल्य तोकेपछि आक्रोश बढेको हो । हिन्दूहरुका भगवाने हनुमानको जन्मदिनको अवसरमा हालै आयोजित एक धार्मीक र्यालीलाई प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि क्रुद्ध भएका यागेशले मुख्यमन्त्रीको टाउकोको मूल्य […]
चीनमा १ सय २० वर्षकै सबैभन्दा गर्मी
वैशाख ३ । चीनको सांघाईमा १ सय २० वर्ष यताकै सबैभन्दा गर्मी आज भएको चीनको समाचार संस्थाले जनाएका छन् । आज मापन गरिएको तापमानमा सन् १८ सय ९६ पछिकै गर्मी दिन भनिएको छ । आजको तापक्रम ३१ दशमलव २ डिग्री मापन गरिएको छ । यस अघि १८९६ मा ३३ डिग्री तापक्रम पुगेको थियो । चीनको […]
१९ औं शताब्दीमा जन्मिएकी महिलाको २१ औं शताब्दीमा निधन
वैशाख ३ । विश्वकै सबैभन्दा धेरै उमेरकी महिला एमा मोरैनोको १ सय १७ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । १९ औं शताब्दीमा जन्मिएर पनि जीवित रहन सफल एमा एक्लो व्यक्ति थिइन् । उनको जन्म १८९९ को नोभेम्बर २९ मा इटालीमा भएको थियो । उनी तीन शताब्दीसम्म जीवन जीउन सफल भइन् । यस क्रममा एमाले असफल […]